Adeegga online lacag la'aan ah. Xisaabinta saqafka Gable saqafka
Xisaabinta qalabka saqafka for Gable saqafka
Sheeg dhinacyada of saqafka
X2 - width ee dhinaca gidaarka dhow saqafka!
Inta u dhaxaysa looxyada lathing R
Xisaabinta Gable saqafka
Y2 - height dheeraad ah
X2 - width dheeraad ah
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay si ay u xisaabiso qalabka saqafka: qadarka of baco (ondulin, Nulin, Suuliyada ama biraha), wax underlay (laami, wax saqafka), tirada battens iyo looxyadiisa waa qoryo.
Waxa kale oo aad xisaabi kartaa qaar ka mid ah dhinacyada waxtar leh ee saqafka.
Barnaamijku wuxuu ka shaqeeyaa laba hababka: a saqafka Gable fudud iyo saqafka leh laba dhinac gables (kooxda saqafyada), ku qor 1 iyo 2 ku qor.
Digniin! Haddii aad qabto saqafka la hal dhinac Gable, ka dibna ay isticmaalaan si ay u xisaabiso nooca ugu horeysay 1, ka dibna ku qor 2. Oo horay ka data helay xisaabiyaa tirada qalabka dhismaha, trusses, loox battens, underlay iyo qalab sheet.
Haddii kale, qaladka loo xisaabin karaa. Ka dib oo dhan, barnaamijka oggolaanayaa jeexan ee saqafka ugu weyn ee hoos u gables kooxda saqafka.
Xisaabinta aad ka arki kartaa a tiro yar, size ama xaddiga wax dhismaha saqafka kala bar iyo qaansada ku - size buuxa ama mugga.
In la xisaabinayo saqafka dheeraad ah - size a buuxa iyo baaxadda, iyo qaansada ku jira laba tiro: xajmiga iyo baaxadda ee mid ama laba kale saqafyada.
Digniin! In sheet xisaabinta ee wax saqafka, maanka ku hayo in barnaamijka helaa on goobta saqafka.
Tusaale ahaan, 2.8 si 7.7 bateen taxane ah sheets oo isku xigta. In dhismaha dhabta ah ku riday 3 saf.
Waayo, xisaab badan oo sax ah ee tirada sheets of saqafka si loo yareeyo height of xaashida loo xisaabin waa in la helo tiro idil of saf.
Ha iloobin inaad wax badan ka hufan dhigay qiimaha xirmi ah.
Marka la xisaabinayo mugga mid ah waxyaabaha la qoryo weyn ee saqafka, hoos Itobiya ee nooca 2, barnaamijka kuma jiraan kooxda gooyn-out hoos pediment ah. Tan waxa u sabab qaar ka mid ah dhibaatooyin hirgelinta barnaamijka.
Malaha waxaan go'aansan doonaa mustaqbalka.
Si kastaba ha ahaatee, wax ka qoryo xad-dhaaf waa lagama yaabo inay baaba'aan ama in la sameeyo qaar ka mid ah hagaajin xisaabaha ay.
Waxaa sidoo kale jiri doona barnaamij gaar ah sheet xisaab ka maskax qalabkan saqafka.
Oo ha iloobin in aad iibsato qalabka dhismaha qaar ka mid ah margin qashinka waa in.